Jarmalka oo xoojinaya amniga Masaajidyada kaddib markii ay halis soo baxday • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Dowladda Jarmalka ayaa ciidamo boolis ah oo dheeraad ah u howlgalin doonta si ay u sugaan amniga masaajidyada, xarumaha tareennada, garoomada diyaaradaha iyo goobaha kale ee xasaasiga ah, maadaama ay soo baxday “halis aad u weyn” oo ka imaan karta taageerayaasha midigta fog, kaddib markii weerar dad lagu laayay uu ka dhacay magaalada Hanau, sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Kooxda dacwad oogeyaasha ah ayaa sheegay in ninka hubeysnaa ee weerarka geystay, oo la dilay, uu ahaa “qof aad cunsuri u ah”.
“Halista amni ee ka imaaneysa xagjiriinta midigta fog, kuwa yuhuudda neceb iyo cunsuriyiintaba waa mid aad u heer sarreysa,” ayuu yiri Mr Seehofer.
Wuxuu arrintan ku qeexay “Khatartii amni darro ee ugu weyneyd ee uu Jarmalka wajaho”.
Image captionMuhammed wuxuu ka mid yahay dadkii ka badbaaday weerarka
“Qof walba oo uu indhaha saaro wuxuu si toos ah uga tooganayay madaxa. Dhulka ayuu seexday kaddibna rasaas ayuu nagu furay dhammaanteen. Aniga darbi ayaan isku qariyay waana dhaqdhaqaaqayay si aan uga dhuunto, laakiin garabka ayuu iga toogtay,” ayuu yiri, isagoo wareysi siinayay warbaahinta Turkish TV.
Dambi baareyaasha ayaa sheegay in dhammaan dadka ku sugnaa meheradda shiishadda ay ahaayeen kuwo asal ahaan qaxootinimo kusoo galay waddanka – qaarkood waxay heysteen dhalashada Jarmalka, halka Turkiga uu sheegay in ugu yaraan shan ruux ay heysteen dhalshada tURKIGA.
Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo ka hadashay weerarka ayaa cambaareysay wax ay ugu yeertay “sunta cunsuriyadda”.